Istaraatiijiyadaha Suuqgeynta Maxalliga ah ee Ganacsiyo Meelo Badan Lagu Xidho | Martech Zone
Istaraatiijiyadaha Suuqgeynta Maxalliga ah ee Ganacsiyo Meelo Kala Duwan Leh
Khamiista, Febraayo 4, 2021 Khamiista, Febraayo 4, 2021 Mandeep Chahal
Ku shaqeynta guul meherado badan waa fududahay… laakiin waa marka aad xaq u leedahay maxaliga ah istaraatijiyad suuqgeyn ah! Maanta, ganacsiyada iyo noocyadu waxay leeyihiin fursad ay ku ballaariyaan gaadhitaankooda wixii ka sarreeya macaamiisha maxalliga ah iyada oo ay ugu wacan tahay dijital. Haddii aad tahay milkiile caan ah ama milkiile ganacsi ku leh Mareykanka (ama waddan kale) oo wata istiraatiijiyad sax ah waxaad badeecadahaaga iyo adeegyada aad u bandhigi kartaa macaamiisha mustaqbalka ee adduunka oo dhan.
Qiyaas ganacsi meelo badan ku yaal oo ah xero-xero oo aad ku leedahay hal xarun weyn (ama dab-damis) iyo dhowr xarumo suuq-geyn suuqeed oo yar yar. Adeegsiga qaab-dhismeedkan, way fududaanaysaa in macaamilku la xiriiro si sax ah halka ay ku nool yihiin.
Sideed u maamuli kartaa ganacsi meelo badan leh adigoon gubin kooxahaaga?
Abaabul - Si aad ula socoto howlaha maalinlaha ah, fasaxa shaqaalaha, iyo codsiyada macaamiisha, waxaad u baahan tahay inaad qaadatid hab nidaamsan. Waa inaad jaangooysaa habsocodyada hawlgalka oo keliya hal meel - laakiin dhammaan meheradaha ganacsi.
Maamulka (S) ayaa dilaya - Waxaad dhisatay shaqaale xoog leh oo socodsiin kara meheradaha kala duwan ama burburin kara. Waxaa muhiim ah in waqti la siiyo si loo shaqaaleeyo maareeyayaal xirfad leh si loo hubiyo in dukaamadaadu ay ugu shaqeeyaan sida aad u rabto. Ha dhayalsan awoodda xirfadaha maamul ee wanaagsan.
Isgaarsiinta - Furaha wax ka qabashada xaaladaha, ballaadhinta aragtidaada ganacsi, iyo la wadaagidda qiimaha macaamiisha waa isgaarsiinta. Si loo ilaaliyo isku xirnaanta waxaad ka faa'iideysan kartaa shirarka magaalada, shirarka toddobaadlaha ah, iyo wicitaannada zoom. Kulamada joogtada ah iyo kuwa khuseeya waxay kaa caawin karaan in waxyaabaha lagu haayo laxanka.
mudnaanta Dejinta mudnaanta saxda ah waxay la mid tahay dhammaystirka 50% dhammaan mashaariicda. Sida lagu sheegay cilmi baaris, meherado badan oo meelo kaladuwan kujira ayaa ugu badnaan 18 saacadood usbuucii ku celcelinta iyo caddeynta xiriirka.
Wadaag - Ma jiro qof naga mid ah oo naga wada xoog badan. Taasi waa xigasho cajiib ah waxayna noqon kartaa hal ku dhiggaaga, sidoo kale! Markaad meherad kala duwan ka shaqeysid, arrimuhu aad bay ufuddaan markii qof walba ogyahay doorarkiisa iyo waajibaadkiisa. Dhis koox firfircoon adoo abuuraya qiimeyaal.
Ka dhig Waxaa Simple - Adeegso tikniyoolajiyadda saxda ah, ka faa'iideyso aaladaha internetka, fududee howlahaaga. Waxaad badbaadin kartaa waqti badan, tamar, iyo ilo badan markaad haysato khariidad muhiim ah oo cad.
Caqabadaha Ganacsi Meelo Badan Leh
Aadida meelo badan ayaa dhib badan. Way fududahay in la dhayalsado ilaha loo baahan yahay ee loogu talagalay mashaariicda iyo hawlaha meheradaha leh meelo badan. Intaa waxaa dheer, ku guuldareysiga diyaarinta nidaam ganacsi iyo istiraatiijiyad suuqgeyn ah oo loogu talagalay ballaarinta ayaa sidoo kale si xun u saameyn kara waxqabadka guud ee shirkadda. Qaar ka mid ah caqabadaha ugu caansan ee ay la kulmaan meherado badan iyo meherado badan ayaa ah:
Engagement - Go’aamada ganacsi ee aan la xakamayn iyo isdhexgalka aan nidaamsanayn waxay ku yeelan karaan culayska ganacsiga. Haddii maareeyahaagu aanu siinin isla miisaanka walaaca sidaad adigu u samaysay, waxay u badan tahay in shaqaalahaagu bilaabi doono inuu seego fursadaha.
Qabyaalad - Meheradaha meela badan, way adkaan kartaa inaad la wadaagto sawirka weyn. Si kale haddii loo dhigo, waxaa jiri kara isku xirnaan la'aan ka dhexeysa kooxaha iyo xafiisyada. Goor dambe, isla dhulkaas ayaa noqda meesha qabyaaladda; waxaad u maleyn kartaa inay jiraan hal koox oo ka shaqeeya xafiis. Hase yeeshe, dhab ahaantii, waxaa jiri kara afar-shan koox oo yaryar. Qof walba ku hayso isla bogga haddii kale waxay u horseedi kartaa lumin kheyraad faa'iido leh.
Performance - Mid ka mid ah caqabadaha ganacsiga meelo badan ayaa caddaynaya sida shaqada loo qabtay! Maaddaama shaqaaluhu yar yihiin, kormeerku wuu caqabad ku noqon karaa. Iyadoo aan la helin dhiirigelin joogto ah, wada xiriir, iyo isdhexgal waxqabadka shaqaalaha ayaa hoos u dhici kara.
In kasta oo socodsiinta goobo badan ay umuuqato wax laga naxo, hadana waa suuragal in lagu guuleysto. Waad abuuri kartaa istiraatiijiyad suuqgeyn maxalli ah iyo sidoo kale inaad la socoto mid kasta oo ka mid ah goobahaaga oo si habsami leh u socda. Waxaa jira dhowr meelood oo si gaar ah loo dhisay si loo maareeyo howlaha ganacsi ee kaladuwan, iibka, iyo dadaalka suuq-geynta - hubi inaad sameyso shaqada gurigaaga si aad u hubiso inay taageerayaan, isu-geynta, iyo iswada xeeladaha aad ka fulineyso goobaha oo dhan.
Maqaalkan, waxaan kula wadaagi doonaa xeelado aad qaadan karto si aad u maamusho suuqgeynta meheraddaada meelo badan.
Toban Xeelado Suuqgeyn Maxalli ah Si Aad Ugu Qaado Shirkadahaaga Meelo Badan Ku Jira Heer Ku-xigga
Geotargeting - Hadday ahaan lahayd xogta ku saabsan caadooyinka macaamiisha, shaqada, iyo adeegsiga baraha bulshada - adoo u weeciya falanqaynta xogta waxaad ka faa'iideysan kartaa dhul-dhisid si aad u dhisto aragtiyo ficil ah. Adiga oo bartilmaameed ka dhiganaya rajadaada iyo macaamiishaada, waxaad sare u qaadi doontaa dakhligaaga guud. Intaa waxaa sii dheer, waxaad u adeegsan kartaa isla taatikada suuqgeynta maxalliga ah si aad u ogaato macaamiisha inay is dhaafsadaan noocyada kale ee maxalliga ah.
Dhacdooyinka Deegaanka - Adiga oo abaabulaya dhacdo maxalli ah waxaad ku dhiirrigelin kartaa macaamiisha inay dhexgalaan oo ay la falgalaan astaantaada. Dhacdooyinka maxalliga ah waa hab fiican oo aan kaliya lagu kobcin karin ganacsigaaga, laakiin sidoo kale loo furo fursadda in wanaag loogu sameeyo bulshada.
Faallooyinka internetka - Faallooyinku waa kuwo wax ka beddelaya ganacsiyada maxalliga ah. Xitaa dib u eegis taban ayaa door ka ciyaareysa dejinta sumadda. Sida aad uga jawaabto dib-u-eegista diidmada ah ayaa kaa caawin karta inaad u beddesho macaamil macquul ah oo macaamil mushahar qaata ah.
97% macaamiisha ayaa marka hore aqriya dib u eegista khadka tooska ah ee ku saabsan wax soo saarka iyo adeegga kahor intaanay amar bixin. Qiyaastii 80% shakhsiyaadka waxay ku kalsoon yihiin dib u eegista khadka tooska ah ee macaamiisha hore.
Dib u eeg 42
Maareeyaha Guud - Maanta, inbadan iyo ganacsiyada badan ayaa fahmay muhiimadda ay leedahay maareynta magacooda internetka. Barnaamijyada warbaahinta bulshada sida Facebook, LinkedIn, iyo Instagram ayaa ka caawinaya ganacsiyada inay ku xirmaan macaamiisha qiimaha leh. Xidhiidhka ka dhexeeya astaanta iyo macaamilka wuxuu u adeegaa door muhiim ah oo ku saabsan xoojinta waxa ugu fiican goob cayiman.
Email Marketing - Suuqgeynta iimaylku waxay sii ahaaneysaa taatikada suuqgeynta maxalliga ah ee ugu wax ku oolka badan. Waxaa taageera shirkado caan ah meherado yaryar oo bilow ah. Olole emayl wax ku ool ah ayaa xoojin kara astaantaada / meheraddaada suuqa. Intaas waxaa sii dheer, suuqgeynta emailka ayaa sidoo kale bixisa fursad ay ku gaarsiiso macaamiisha jira adeegyo la habeeyay.
Suuq Geynta Farriinta Qoraalka - Kanaalka suuqgeynta ee SMS wuxuu ku korayaa si heer sare ah isla markaana ganacsiga maxalliga ah ayaa hogaaminaya xirmada kaqeybgalka. Ma jiraan wax la mid ah farriinta waqtiga ku jirta qalabkaaga moobiilka si aad dareenkaaga ugu soo jeediso dalab maxalli ah ama qiimo dhimis ah.
Marka la barbardhigo 2016, 23% dad badan ayaa doorta inay ka helaan farriimaha SMS-ka ee shirkadaha sannadka 2020. 82% ee farriimaha qoraalka waxaa lagu akhriyaa 5 daqiiqo gudahood, laakiin macaamiisha kaliya waxay furaan 1 ka mid ah 4 emayl oo ay helaan.
Diiwaanada Deegaanka - Macaamiil badan ayaa leh buug lagu kalsoon yahay oo ay ka raadsadaan meherado. Hadday tahay raadinta Yelp, Khariidadaha Google, CitySearch, ama adeeg kale, ilaalinta meheraddaada iyo lambarada taleefanku oo cusboonaysiin ah ayaa macaamiil badan u kaxayn doonta meheraddaada.
Dhiciyaan Search Engine - Joogtaynta deg deg deg deg ah, taleefanka gacanta oo ka jawaaba kana kooban gobollada iyo astaamaha aad ugu adeegto mid kasta oo ka mid ah goobahaaga ayaa ka ilaalin doonta feejignaan dheeri ah dadka isticmaala mashiinka raadinta ee raadinaya alaabadaada ama adeegyadaada. Maalgeli barxad kaa caawin karta inaad kormeerto qiimeynta raadinta maxalliga ah ee mid kasta oo ka mid ah goobahaaga.
Warbaahinta bulshada - Joogitaanka joogitaan la bartilmaameedsaday iyo dhisida maxalli ku socda baraha bulshada ayaa u kaxayn kara taraafikada maxalliga ah meheraddaada. Ka faa'iideyso dhammaan kanaallada iyo qaababka qoraallada warbaahinta bulshada - laga bilaabo tweets, hashtags, videos, sawiro, iyo sheekooyin!
Advocacy - Soo bandhig qiimo dhimis tixraac ah oo hubi inaad iskaashi la yeelato ururada kale ee maxalliga ah iyo ganacsiyada si ay kaaga caawiyaan wadista hadalka ()Naag) suuqgeynta ganacsigaaga. Ma jiraan wax ka kalsooni badan talo soo jeedinta asxaabta markay tahay ganacsiga maxalliga ah.
Iyo, dabcan, waad ku sasabi kartaa macaamiishaada hadda jira adoo u keenaya dalabyo khuseeya, shakhsi ahaaneed, iyo maxalli ah. Nidaamyada suuq geynta ee dhijitaalka ah waxay ku fiican yihiin inay kaa caawiyaan inaad dib u beegsato macaamiisha hadda jirta.
Si aad u maamusho ganacsi meelo badan ku yaal waxaad u baahan tahay inaad horumariso xirfadaha dhaqdhaqaaqa oo aad barato sida wax badan loogu qabto waqti yar. Waxaan rajaynayaa in tilmaamahani ay waxoogaa jihooyin ah kugu siiyeen!
Tags: doodiddaEmail Marketingxayeysiinta geotargetedbar-tilmaameedkadib u eegista googleliistada deegaankadhacdooyinka maxalliga ahsuuq geynta maxalliga ahraadinta maxalliga ahmaxalliga ahmeelo badanmeherado badanFaallooyinka internetkamaaraynta sumcadSEOsms suuq geyntawarbaahinta bulshadafarriinta qoraalka suuqgeynta
Mandeep Singh, aasaasaha SEO Discovery, shirkadda hoggaamineysa ee suuq geynta dijitaalka waa u ololeeye khibrad leh dhanka suuqgeynta SEO iyo fagaaraha iibka dhijitaalka.
Xarunta Xuquuqda Suuqgeynta ee Salesforce: AMPScript iyo Cloud Page Tusaale
Ku dhowaanshaha Suuqgeynta iyo Xayeysiinta: Teknolojiyadda iyo Tabaha
Aug 26, 2021 at 7: 02 AM
Waad ku mahadsan tahay wadaagista istaraatiijiyadan suuqgeynta maxalliga ah.
Meherad meelo badan leh, ma inaan beegsannaa subdomain?
Maxaad soo jeedin lahayd?
Sep 13, 2021 at 6: 30 PM
Hi Xitaa, in kasta oo subdomain-ku uu yahay hab macquul ah oo looga shaqeeyo meelo badan haddii aad ganacsi tahay, uma fiicna SEO. Google asal ahaan wuxuu ula dhaqmaa subdomain kasta inuu leeyahay awood u gaar ah… Waxaan aaminsanahay inay tahay kormeer nasiib darro ah dhinaca Google. Sababtaas awgeed, waxaan inta badan ku riixaa meherado goobo badan leh si ay ugu dhex maraan fayl hoosaadyo halkii ay ka ahaan lahaayeen subdomains.